EggCoin စျေး - အွန်လိုင်း EGG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို EggCoin (EGG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ EggCoin (EGG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ EggCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 539 183.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ EggCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
EggCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
EggCoinEGG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.177EggCoinEGG သို့ ယူရိုEUR€0.151EggCoinEGG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.136EggCoinEGG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.162EggCoinEGG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.6EggCoinEGG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.12EggCoinEGG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč3.95EggCoinEGG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.665EggCoinEGG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.236EggCoinEGG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.248EggCoinEGG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$3.97EggCoinEGG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.37EggCoinEGG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.952EggCoinEGG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹13.21EggCoinEGG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.29.96EggCoinEGG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.243EggCoinEGG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.269EggCoinEGG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿5.51EggCoinEGG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.23EggCoinEGG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥18.86EggCoinEGG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩209.75EggCoinEGG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦68.68EggCoinEGG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽12.96EggCoinEGG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴4.9
EggCoinEGG သို့ BitcoinBTC0.00002 EggCoinEGG သို့ EthereumETH0.000472 EggCoinEGG သို့ LitecoinLTC0.00332 EggCoinEGG သို့ DigitalCashDASH0.00205 EggCoinEGG သို့ MoneroXMR0.00205 EggCoinEGG သို့ NxtNXT14.4 EggCoinEGG သို့ Ethereum ClassicETC0.0261 EggCoinEGG သို့ DogecoinDOGE53.56 EggCoinEGG သို့ ZCashZEC0.00227 EggCoinEGG သို့ BitsharesBTS6.82 EggCoinEGG သို့ DigiByteDGB5.81 EggCoinEGG သို့ RippleXRP0.64 EggCoinEGG သို့ BitcoinDarkBTCD0.00625 EggCoinEGG သို့ PeerCoinPPC0.592 EggCoinEGG သို့ CraigsCoinCRAIG82.59 EggCoinEGG သို့ BitstakeXBS7.73 EggCoinEGG သို့ PayCoinXPY3.16 EggCoinEGG သို့ ProsperCoinPRC22.74 EggCoinEGG သို့ YbCoinYBC0.0001 EggCoinEGG သို့ DarkKushDANK58.12 EggCoinEGG သို့ GiveCoinGIVE392.27 EggCoinEGG သို့ KoboCoinKOBO41.3 EggCoinEGG သို့ DarkTokenDT0.163 EggCoinEGG သို့ CETUS CoinCETI523.02
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 02:45:02 +0000.